ဟန်းဖုန်းနဲ့ ဒရိုင်ဘာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဟန်းဖုန်းနဲ့ ဒရိုင်ဘာ
Posted by မိုချို on Jul 25, 2012 in Creative Writing, Education | 27 comments
ထိထိ ရောက်ရောက် အသိပေး၊ ပညာ ပေး သင့်ပါတယ်
မြန်မာပြည် မှာ ဖုန်းကဒ် တစ် ကဒ်ရဲ့ ဈေး က နိုင်ငံ တကာနဲ့ ယှဉ် ရင် များသေး တယ် လို့ ပြော နေ ကြ ပေ မယ့် လို့ ဒီတခေါက် မြန်မာ ပြည် ပြန် တော့ တော်တော်များများ ဖုန်း ကိုင် နိုင် နေကြ တာ တွေ ခဲ့ ရပါတယ်။ စီးနေ ကြ ဆိုက် ကား သမား တွေ ( အသောက် အစား ကင်းတဲ့ သူတွေ) က အစ၊ ဈေး ထဲက မုန့် ဟင်း ခါးသည် တွေ၊ ငါး သည် တွေ အလည်၊ စီး ခဲ့ သမျှ ကား တွေရဲ့ ဒရိုင်ဘာ တွေ အား လုံး ကိုယ် စီ ဖုန်းလေးတွေ နဲ့ တွေ့ ခဲ့ ရတာ တော့ ၀မ်းသာ စရာ ပါ။
တခြား သူတွေ အတွက် ဖုန်း ကို ဘယ် လို ပြောပြော ပြဿနာ မရှိပေမယ့် ယာဉ်မောင်းတွေ ကားမောင်းရင်း ဖုန်းပြော တာတော့ အလွန် ပြဿနာ ရှိပါတယ်။ လက် တဖက် က ဖုန်း ကိုင် ပြီး လက် တဖက် တည်းနဲ့ ကားကို ထိန်း ပြီးမောင်း ၊ အဲဒီ အချိန်မှာ သူ့ အာရုံ ကလည်း ကားနဲ့ လမ်း ပေါ် မှာ မရှိ တော့ ပဲ ဖုန်း ထဲ ကို ရောက် သွားမှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကားမောင်းရင်း ဖုန်းပြောတာ အန္တရာယ် အလွန် များ တယ် ဆို တာ အားလုံး သိကြ မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကားသမားတွေ တော်တော် များများ ကားမောင်းရင်း ဖုန်းပြော ကြ တာကို စိတ် မချမ်းသာ စွာနဲ့  ကြုံ ခဲ့ ရပါတယ်။
ကျမတို့ စီးခဲ့ တဲ့ တက္ကစီ ယာဉ်မောင်း တယောက် ဆိုရင် ဖုန်း ကို တောက်လျှောက် ကို ပြော ပါတယ်။ အ၀င် ဖုန်း လက်ခံ ပြောရုံ တင် မက ဘူး ၊ သူက ပါ ပြန် ခေါ် ပြီး ပြော နေတာပါ၊ အရး ကြီးတဲ့ ကိစ္စ တွေ လည်း မဟုတ် ပါဘူး။ မင်းတို့ နား မိုး ရွာ လား တို့ ၊ ဘယ် ဆိုင် မှာ ဆုံ ရအောင် တို့ စတဲ့ အရေးမပါတဲ့ အကြာင်း အရာတွေ ပြော နေတာပါ။ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး ကနေ မြောက် ဒဂုံ ကို ညနေပိုင်း ကားတွေ ရှုပ်တဲ့ အချိန် ကြီး မှာ အော် ကြီး ဟစ် ကျယ် ဖုန်း ပြော ရင်း ကားမောင်း နေ တာ ၊ ကျမတို့ ကတော့ ဘုရား တ လို့ ပေါ့ ။ တခြား တက္ကစီ ယာဉ်မောင်း တွေ လည်း ပြော ကြ ပေမယ့် သူ့ လောက် တော့ မဆိုး ပါဘူး ၊ အ၀င် ဖုန်း ကိုပဲ ခဏလေး ပြော ကြပါတယ်။ ဘယ် လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကားမောင်း ရင်း ဖုန်း ကို လက် က ကိုင် ပြီး မပြော သင့် တာ တော့ အမှန်ပါ။
တက္ကစီ ယာဉ်မောင်း တင်လား ဆိုတော့ ၊မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ ပုဂံ ကို သွားတဲ့ express ယာဉ်မောင်း လည်း ထိုနည်း လည်းကောင်း ပါပဲ။ ယာဉ် မတော် တဆ မှု များလွန်းတဲ့ အမြန် လမ်း မှာ မောင်း နေရင်း မကြာခဏ ဖုန်းပြော နေတာ ကို အသည်း တယားယားနဲ့တွေ့ ခဲ့ ရပါတယ်။ အထိ အခိုက် များတဲ့ ယာဉ် မတော် တဆ မှု တွေ က ည ဘက် တွေ အဖြစ် များတတ်တော့ အချိန် နည်း တဲ့ ကြား က အသွား ၁ ရက် အပြန် ၁ ရက် အချိန် ပုပ်ပေမယ့် ကျမ တို့ နေ့ ကားပဲ စီးပါတယ်။ ယာဉ်မောင်း နောက် တည့် တည့် ခုံ မှာ ထိုင်တာဆိုတော့ သူ ဖုန်းပြောတိုင်း တွေ့ နေ ရ တော့ ဘုရား စာပဲ ဖိ ရွတ်နေမိတော့ တယ်။ ရန်ကုန် အပြန် ယာဉ်မောင်း ကတော့ ထမင်းစား နားတဲ့ အချိန် နဲ့ ကျန်း မာရေး အတွက် လပ်းဘေး ချ ရပ် ပေးတဲ့ အချိန် မှာ ပဲ ခဏတဖြုတ် ပြော တာတွေ့ ပါတယ်။ အဲ လိုပဲ ဖြစ်ရ မှာပါ။
ကားဈေး တွေ လည်း ကျ လာတော့ ရန်ကုန် လမ်း မ တွေ ပေါ် မှာ လည်း ကားတွေ သိသိ သာသာ များ လာ သလို ၊ ကိုယ် ပိုင် ကား မောင်းနေ တဲ့ လူ တွေ လည်း တော် တော် ဖုန်း ပြော ကြတာ တွေ့ မိတယ်။ ဒါတောင် လိုင်း ကား မစီး ခဲ့ လိုက် ရလို့ လိုင်း ကား ဒရိုင်ဘာ တွေ ရော ဖုန်း ပြော ကြ သလား ဆို တာ မသိ ခဲ့ ရပါဘူး ။ ဘယ် သူ မဆို အလုပ် ချိန် တွင်း ကို ပါစင် နယ် ဖုန်း ကြာကြာ မပြော သင့် ပါဘူး ။ အန္တရာယ် များ ပြီး အသက် ပေါင်း များစွာ ကို တာဝန်ယူထားရတဲ့ အများ စီးတဲ့ ကားတွေ ရဲ့ ယာဉ်မောင်း တွေ က ပို ဆင် ခြင် ရပါမယ်။
ကားမောင်းရင်း လက်ကိုင်ဖုန်း မပြော ရ ဆိုတဲ့ ဥပဒေ မြန် မာ ပြည် မှာ ရှိပြီး သား ပါ။ အရင် တုန်း ကတော့ ကားမောင်းရင်း လက်ကိုင် ဖုန်း ပြော နိုင်တဲ့ လူတန်း စား က ပြောပလောက် အောင် မရှိ ပေမယ့် အခု ချိန် မှာတော့ ယာဉ်မောင်းတွေ တော်တော် များများ က လက် ကိုင်ဖုန်း ကိုယ် စီ နဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ ဆိုတော့ အဲဒီ ဥပဒေ ကို ထိထိ ရောက်ရောက် အသိပေး၊ ပညာ ပေး၊ အရေးယူ ဖို့ လို အပ်နေပါပြီ။ မဖြစ် မနေ ပြော စရာ ကြုံ လာ ရင် စလုံး မှာ လို နားကြပ် နဲ့ သုံးတတ် တဲ့ အကျင့် လုပ်ရပါမယ်။ ခက် တာ က လည်း ကိုယ့် နိုင်ငံ မှာ က ဖုန်း ဆို တာလေး ကို လူတန်း စား မရွေး ကိုင် နိုင် ကြ တာ သိပ် မကြာ သေးတော့ ဖုန်း ကို အလုံး လိုက် ကလေး ကိုင် ရတာ ပို သဘော တွေ့ ကြ တယ် ထင်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ယာဉ်မောင်း တွေ အတွက် ကတော့ ကားမောင်း ရင်း ဖုန်း ပြော မယ် ဆိုရင် မဖြစ် မနေ ဖုန်း နားကြပ် လေးနဲ့ သုံးကြ ဖို့ များများ တိုက်တွန်း ကြ စေ လိုပါတယ်။
ဖုန်းတောက်လျှောက် ပြောရင်း ကားမောင်း လာတဲ့ သူပါ။ သည်း မခံ နိုင် တဲ့ အဆုံး ဖုန်းဆက် ပြော နေ ရင် ဆင်းပြီး နောက် တစီး တား စီးတော့ မယ် ဆိုတော့ မှ ရပ်ပါတယ်။
ပုဂံ ကို သွားတဲ့ express ကားသမား ကိုလည်း ရိုက်ခဲ့ ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက် တည့်တည့် က ရိုက် တာ နောက် ကြည့် မှန် ထဲ့ သူ့ မျက် နှာ ကြီး အပြည့် ပေါ် နေလို့ မတင် တော့ ပါဘူး။
မို co has written 41 post in this Website..
View all posts by မိုချို →
၄၈ အထူးစီးလာတုန်းကလည်း ဒီလိုဘဲ။
ကားသမားက ကားမောင်းရင်း တလမ်းလုံးဖုန်းပြောနေတာ။
စပယ်ယာကလည်း ၀င်ဝင်ပြောလိုက်နဲ့ တလမ်းလုံးကိုဟုတ်နေကြတာဘဲ။
စိတ်က တနေရာထဲမှာ စုစည်းမထားနိုင်တော့ အမှားအယွင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်လေ။
ဒါကြောင့် ကားမောင်းရင်းဖုန်းမပြောရ (အထူးသဖြင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွေ) ကိုကြပ်ကြပ်မတ်မတ်လုပ်သင့်တယ်။
တကယ်က ဟန်းဖရီးနဲ့တောင် မပြောသင့်ဘူး မှတ်ပါတယ်…
စိတ်လှုပ်ရှားမှု အံ့သြမှု တို့ က တခနအတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့
အလုပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်လို့ပါပဲ …
“ဟဲလို .. သားရေ …မင်း သမီး အငယ်မတော့ လင်နောက်လိုက်သွားဘီကွယ့်..”
ကျွီ…ဟီဟီ .. ဒုန်း ..အုန်းး
“ဟဲလို …မောင် ..အိမ်မှာ မီးလောင်နေတယ်..”
“ဟဲလို … ငါ့တူကြီ ..မင်း အဘတော့ ဆုံးရှာပြီကွာ ..”
“ဟဲလို သယ်ရင်း. . ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းကွာ… မင်းကို .. ရာထူးအတွက် ပရိုမိုးရှင်း
ကားမောင်းတယ်ဆိုတာ .. မျက်စိ-နား-နှာခေါင်း-နဲ့-ခြေ-လက်၂ဖက်လုံး
ကို ဦးနှောက်က ဟန်ချက်ညီထိန်းချုပ်ပြီး ဟာမိုနီကျကျ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ကိစ္စရပ်မို့ပါဗျာ..
ဟောသည့်ခေတ် ရောက်ရင်တော့ တမျိုးပေါ့..
ကိုယ့်အားနည်းချက်လို့ပြောရရင်… ကျွန်တော်က ကားမောင်းနေချိန်သီချင်းဖွင့်ရင်တောင် ကျွန်တော့်အတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သလိုခံစားရသူပါ…
ကားမောင်းတိုင်း ဖုန်းပြောဖို့မစဉ်းစားပဲ… တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြန်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းလဲ ဖြေကြားတတ်ပါတယ်…
Bluetooth လေးတစ်ခုကို ၃သောင်းလောက်ထက်ပိုမကျပါဘူး… ၀ယ်ထားလိုက်ပါ…
ငွေသုံးသောင်းဟာ ကိုယ့်အသက်ထက်ရော… တခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ထက်ကို အများကြီးဈေးသက်သာပါတယ်…
တကယ်တော့ ဂီဂီပြောသလိုပါပဲ… Hand Free နဲ့ပြောရင်တောင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ပြသနာဖြစ်နိုင်တာမို့….
ဖြစ်နိုင်ရင် ဖုန်းမပြောဖို့နဲ့ မဖြစ်မနေအချိန်မှာဆိုလဲ လိုရင်းတိုရှင်းပြောကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာ…
ကိုယ်တိုင်ကျတော့ စက်ဘီးလေးစီးရင် Bluetooth Headset နဲ့ သီချင်းနားထောင်တတ်… ဖုန်းပြောတတ်သေးတယ်…
“ဟယ်လို .. မောင် …. ရှင့် မက်ပရိုပေါ် ရွှေဝါလေး ရှူရှူး ဗြန်း သွားတယ် ”
တိန် ..ဂုံးဂလုန်း ..ဗွမ်း …!!!!!
” ဘာ ” ဆိုပြီးတော့ အသံတောင်ထွက်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူး….
” ဂိဂိဂိ ” ဆိုပြီး နှလုံးရောဂါလေးများဖောက်ပြီးတန်းသေသွားမှာ… ဟိ…
သူက ရပ်ထားတာကို နောက်က ၀င်ဆောင့်တာလေ..
ဆင်းလာပီး သူ့ကို ဘာပြောသလဲဆိုတော့..
ဆိုတော့ အမမိုချိုထောက်ပြတာလေးက လတ်တလော လိုအပ်ချက်လေးမို့..
မြင်နိုင်ပြင်နိုင် သတိပြုနိုင်ကြပါစေ ကြောင်း..
စကားမစပ်..အမမိုချို ကို ရခိုင်အလှူတုန်းကတောင် မျှော်နေသေးရဲ့..
ပထမဆုံးလက်မက ကျနော်ထောင်ခဲ့တာပါဗျ ..နော်
ရွာ ထဲ ပြန် အ၀င် ကို ခရီးသွား ဆောင်းပါး လေးနဲ့ နှုတ် ဆတ် မလို့ ဟာ စိတ် ထဲ ကျလိကျလိ ဖြစ် ခဲ့ ရ တဲ့ အကြောင်း ကို အရင် ရေး မိ ရပါတယ်။
ကျမတော့ ရွာ အလှု နဲ့ ကပ် လွဲရပါတယ်။ ရွာသူား တွေ သွား လှူ တဲ့ နေ့ က ကျမတို့ ပုဂံမှာ လည် တဲ့ နေ့ ပါ။
ကျမ မသွား ခင် က တင် ခဲ့ တဲ့ အလုပ် ခေါ် တဲ့ ပိုစ့် ကို ဖတ် မိ ပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူတွေ တော် တော် များပါတယ်။ ရန်ကုန် မှာ နေတဲ့ အချိန် သိပ်မရှိ ပဲ ခရီး ပဲ ထွက်နေတော့ ဒီ ပြန် ရောက်မှ ပဲ အိမ်က လူ ကြီး တယောက် မေးလ် ဖွင့် ပြီး လျှောက်လွှာတွေ ကြည့် ရပါတယ်။ သူ စိတ် ၀င်စားတဲ့ သူတွေတော့ ဖုန်း ပြန် ခေါ် ပြီး မေးနေတာ တွေ့ လေရဲ့။ ကျမ ကတော့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူ လျှောက် လို့ ရအောင် တင် ပေး တာပဲရှိတယ်။ သူ့ အလုပ်နဲ့ အဆင် ပြေ မပြေ ရွေး တာက သူ့ အလုပ် ဆိုတော့ဘယ် သူတွေ ကို ပြန် ခေါ် ဖြစ်လဲ မသိတော့ဘူး။
အစ်မ မိုချိုရေ အရမ်းကို အန္တရာယ်များတဲ့ အဖြစ်ရယ်ပါ …. ။
ကြုံဖူးတယ် …. ဖုန်းမပြောနဲ့လို့များ သွားပြော ကြည့် … စကောထဲ ဇီးဖြူသီးလှိမ့်သလိုကို ရမ်းခါနေအောင် မောင်းခေါ်သွားတာ ဘယ်လို ဘယ်လို အိမ်ရောက်သွားမှန်းကို မသိဘူး …. ။
ဘလူးတု နားကြပ်လေးတွေနဲ့လည်း အသံတိုးတာကလွဲလျှင် …အဆင်ပြေတာပါပဲ …. ။
ခရီးသည်တင်မောင်းနေတဲ့ ဒရိုင်ဘာတွေရဲ့ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် မတော်တဆမှု မဖြစ်ပွားခင် ၊ သတိပေး အရေးယူတာမျိုးတော့ ရှိသင့်ပါပြီ ။
မမိုချို အဝေးပြေးအမြန်လမ်းပေါ်မှာ ဖုန်းပြောရင်းမောင်းတယ် ဟုတ်လား မမိုချိုရယ် အမမို့လို့သာ ငြိမ်ခံလာတာ ညီမဆို ချက်ချင်းသွားပြောမှာ ပြီးတော့ ကားဂိတ်ကိုလည်းတိုင်မှာ ညီမဟိုနေ့က ခရီးထွက်တာ အပြန်မှာ ကားပေါ်တက်တော့ ကားသမားက ဘုရားခွေအရင်မဖွင့်ဘူး တစ်ခြားကားတွေဆို ကားပေါ်မှာ စစချင်းတရားခွေတို့ ဘုရားစာတို့ကို အရင်ဖွင့်တယ် ညီမက ကားပေါ်ကယာဉ်နောက်လိုက် မမလေးကိုပြော လိုက်တယ် ဘုရားခွေဘာလို့မဖွင့်ပဲ သီချင်းခွေဖွင့်တာလဲ ဘုရားခွေဖွင့်ပေးပါလို့ ……. ညီမကတော့ တစ်ခုခုဆို အမှားမခံဘူး ချက်ချင်းပက်ကနဲ့ပြောလိုက်တာပဲ ….. Taxiကားဆိုတာ ကိုယ်ကပိုက်ဆံပေးပြီးငှား စီးလာတာ ကိုယ်စီးတဲ့အချိန်ကိုယ်ပိုင်တယ် ကိုယ်မကျေနပ်တာဆို ပြောပလိုက်မယ် …….
ရွာသူားတွေနဲ့ ဆုံ ဖို့ ကံ မပါ သေး လို့ ပဲ မှတ် လိုက် တော့ မယ် အမတ်မင်း ရေ။
ဟုတ်တယ် ဂီဂီ ရေ နားကြပ် သုံး တာတောင် မဖြစ်မနေ လို အပ်မှ ပြောသင့်တာ။ စကား မစပ် မောင်ဂီ မလဲ ဖား ဖြစ်လိုက် မြွေ ဖြစ် လိုက်နဲ့ မျက်စိ တောင် လည် တယ်။
ဘက် စ် ဒရိုင် ဘာ တွေလဲ ပြောတာ ပဲလား အိပုရေ။
ဟိုင်း ဝေး ပေါ် မှာ တုန်း က ပြော မလို့ ဟာ အီ တုန်း ပြော တဲ့ ဒရိုင်ဘာ လို လုပ်မှာ စိုးလို့ ငြိမ်နေ လိုက်ရတယ် ခိုင်ခိုင် ရေ။ ကိုယ် ပြော လိုက်မှ စိတ် ဆိုးပြီး အရမ်း မောင်း လိုက်မှာ စိုးလို့။ ခု တော့ လည်း သူ တယောက် ထဲ ကို မရည် ရွယ် တော့ ပဲ ဒရိုင် ဘာ အားလုံး ကို ရည် ရွယ် ပြီး ရေးလိုက်တော့ တယ်။
အင်း ပြောချင်နေတာကြာပြီ ခုမှပဲတိုက်ဆိုင်တော့တယ်။ မြို့ထဲကနေ တာမွေဘက်ကိုသွားတာ ၃၉ အထူးယဉ်စီးတယ်။ ကျွန်တော်က ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း ကနေတက်တာ။ driver နောက်နားမှာလူလွတ်တာ နဲ့အဲ့မှာထိုင်ဖြစ်တယ်။ ခနနေတော့ ဖုန်း ring သံမည်လာတော့ အဲ့ driver ကဖုန်းပြောပါလေရော။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်နေမိတယ် လက်တစ်ဖက်ကဖုန်းကိုင် တခြား (ညာဘက်) ကကေားဂွေကိုင်လို့ပေါ့ဗျာ။ သိပ်မကြာပါဘူး မဟာဗန္ဓုလလမ်းနဲ့ သိမ်ဖြူလမ်းဆုံတဲ့နေရာရောက်တော့ ဒီကောင်ကွေ့ရတော့မယ်လေ သိမ်ဖြူလမ်းဘက်ကို(ဘယ်ဘက်ကို ကွေ့ရတော့မှာ) အဲ့မှာ ကားကို လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ ကွေ့တယ်ဗျာ။ ကံကောင်းလို့ပလက်ဖောင်း ပေါ်တက်တော့မလို့။ ပလက်ဖောင်းကိုတက်ဖို့လုပ်တော့မှပဲ လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကွေ့တော့တယ်။ ပြီးတော့ ဆရာသမားက ဆက်ပြောသေးဗျား။
ဖုန်းဈေးတွေကျဆင်းလာတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသုံးပြုတဲ့သူတွေကတလွဲဆိုရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ ဖုန်းတစ်လုံး ၅၀၀၀ နဲ့ရရင်ပိုကိုင်လာကြမယ်။ ဆိုက်ကားသမားလဲကိုင်မယ်၊ ကားသမားလဲကိုင်မယ်။ နောက်ပြီး စည်းကမ်းမရှိ ဆိုက်ကားနင်းရင်းပြော စက်ဘီးစီးရင်းပြော ကားမောင်းရင်းပြောကြရင်တော့ ယဉ်တိုက်မှုဖြစ်ကြမှာစိုးရိမ်မိတယ်ဗျာ။
နောက်တစ်ချက်က လိုင်းကာပေါ်မှာ ဖုန်းနဲ့သီချင်းဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြတယ်ဗျာ။ အီးယားဖုန်း နဲ့နားထောင်ရင်ကျွန်တော်မပြောလိုပါဘူး ခုတော့ speaker ဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြတယ်ဗျာ ကားပေါ်မှာဆူညံလို့။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက Public နဲ့ Private ခွဲခြားမသိကြတာ တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာ။
“ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက Public နဲ့ Private ခွဲခြားမသိကြတာ တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာ။”
ဟုတ်ပါတယ် အမှန်ပါပဲ ရှင်။
အဝေးပြေးကားမှာ ဖုန်းပြောတာကတော့ အတော်လေး စိတ်ပူစရာကောင်းပါတယ်။ တင်လာတာ လူအများကြီးလေ။ အသက်ပေါင်း များစွာ သူ့လက်ထဲမှာ။ တက္ကစီသမား ဖုန်းပြောတာလည်း အန္တရယ် မသေးလှပါဘူး။
ပညာပေး၊ အရေးယူ ဆိုတာ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ် ဆိုတာ တတပ်တအား ထောက်ခံပါတယ်အမရေ။
ဟုတ်ပါတယ် .. အစ်မပုခ်ျနဲ့ myanmarcitizen ပြောသလိုပါပဲ … ပါ့ဘလစ်နဲ့ ပရိုက်ဗိတ်ကို ခွဲခြားမသိတာတွေ အတော်ဆိုးတယ် … ။ အီးယားဖုန်းမတပ်ပဲ သီချင်းနားထောင်လို နားထောင် ၊ စပီကာဖွင့်ပြီး လူကြားထဲ စကားပြောလိုပြော ၊ နောက်ပြီး …….. ဖုန်း ring tone သံကို အမြင့်ကြီးထား …. ပြီးရင် ဖုန်းကို တော်တော်နဲ့ မကိုင်တာမျိုး ….. ဒါတွေကို ဂုဏ်ယူစရာလို့ထင်ပြီးများ လုပ်နေကြသလားမသိ … အတော်ခက်ပါတယ် … ။
ရုံးတွေမှာဖြစ်ဖြစ် ၊ တခြားပါ့ဘလစ်ရောတွေမှာဖြစ်ဖြစ် … .. ကိုယ့်ဖုန်းသံ အသံပြဲကြီးထွက်လာလျှင် … ဟ`ိုကကြည့်ဒီကကြည့်နဲ့ … (အဓိပ္ပါယ်မျိုးစုံပါတဲ့အကြည့်တွေနဲ့) …. စိတ်ကုန်ဖို့ကောင်းပါတယ် …. ။ ဒါကို သူတို့ကတော့ .. မျက်နှာကြောတင်းတင်း ခပ်တည်တည်ပဲ …. ဖုန်းသံပြဲကြီးနောက်ကွယ်မှာ အသံကြီးပြဲပြဲနဲ့ .. .ဖုန်းကို အာဂေါင်ခြစ်ပြီးပြောတာ … ။ နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတယ် ……. ။
မမတုံကို ရေးတာဖတ်ပြီး ၀င်အာချင်လို့
ဂျာပွန်စာသင်တန်းမှာ သင်တန်းက ဂျာပွန်ဆြာကဘာပြောလဲဆိုတော့
မြန်မာမှာ ဘတ်စ်ကားပေါ်တွေမှာ ဖုန်းပြောတဲ့လူ တော်တော်များတယ်နော်တဲ့
သူတို့ဆီမှ ဒါမဲတဲ့ (လုံးဝမရ)
သင်တန်းမှာလည်း ဖုန်းပိတ်ချင်ပိတ်၊ မဟုတ်ရင် ဆိုင်းလန့်၊ ဖုန်းပြောလို့မရ
တို့ကတော့ အေးချေးလေး ဟိ
ပြီးတော့ ဖုန်းနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး၊ ထပ်အာချင်လို့
သူတို့ဆီမှာတော့ တွေ့ရင် တွေ့တဲ့လူက ကန်ထုတ်ပြစ်တယ်ဆိုပဲ
စိုးတယ်. ..စိုးမိတယ်.. စိုးထိတ်မိတော့တယ်ကွယ်..
အစီးဝေးခန်းမနဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေထဲမှာလဲ ဒီပြဿနာရှိပါတယ်။
အချိန်တွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက သင်ပြသွားပါလိမ့်မယ်၊ အခုကတော့အစဆိုတော့ သူသူကိုယ်ကို လက်ရားနေကြတာပါ၊ အမှန်တကယ်ပေါများလာရင် ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ သိလာမှာပါ။အများကိုင်နိုင်အောင်၊ ပေါများအောင်လုပ်ပေးဖို့သာလိုတာပါ။
မူးရင်မမောင်းနဲ့ ၊ မောင်းရင်မမူးနဲ့ အပြင်ကို ပြောရင်မမောင်းနဲ့၊ မောင်းရင်မပြောနဲ့ ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားပါ
ကားမောင်းရင်း ဖုန်းပြောတော့ အန္တရာယ်များတာပေါ့
5000 ထောင်တန်ဖုန်းထွက်လာရင် ဘယ်တစ်လုံးညာတစ်လုံးနဲ့ ပြော ခြေထောက်နဲ့ စတီရာတိုင်ကို ထိမ်းမယ် ထင်ပ…။
ခြောက်ချောင်းမြောက် ထောင်ပြီးအားပေးလိုက်ပါတယ်(လက်မ)။ မှန်ပါတယ်။ မမိုချိုနဲ့အားလုံးပြောကြသလို ယာဉ်မောင်းနေတုန်း ဖုန်း(လုံးဝ)မပြောသင့်ပါဘူး။ ကားမောင်းနေတုန်း ဖုန်းပြောတာဟာ တော်တော်အန္တရာယ်များပါတယ်။ တစ်ခြားလူတွေတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ကားမောင်းရင်းဘေးကထိုင်လိုက်လာတဲ့သူနဲ့တောင် စကားမပြောတတ်ဘူး။ သီချင်းဆိုရင်လည်း အေးအေးဆေးဆေးမောင်းလို့ရတဲ့ ယာဉ်ကြောမျိုး ဒါမှမဟုတ် တစ်အားနွမ်းနယ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှသာ နားထောင်တတ်ပါတယ်။
ယာဉ်မောင်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လက်၊ ခြေနဲ့ခါး စတဲ့ ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေသုံးပြီး သတိကြီးကြီးထားမောင်းနှင်ရတာပါ။ တော်တော့်ကို အလုပ်ရှုပ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါပဲ။
ဖိတ်စာပို့ပါတယ် (စာပို့သမားမအားလို့ နောက်ကျတာခွင့်လွှတ်ပါ)
နှစ်သက်သူတွေရဲ့ မှတ်ချက်တွေဖတ်ပြီး ပီတိလေး ခံစားရဖို့ရယ်။
အခြားသူတွေလည်း အလွယ်တကူဖတ်မိကြဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။